Ny endriky ny metaly ao amin'ny trano fonenan'ny fanenanam-biriky: hanamboarana vola amin'ny tananao manokana - avy amin'ny fitaovam-pitsaboana mendrika sy avy eny an-jorony - Articles - 2019
Toe-pahamendrehana azo antoka ho an'ny trano fonenana manao izany avy amin'ny fitaovana maimaim-poana: sarobidy nefa mahafa-po
Ny mpamboly mpanangom-baovao tsirairay dia tsy azo ihodivirana ny fanontaniana ny fananganana trano fonenana ho an'ny fambolena. Amin'ny sehatra misokatra, dia tsy manam-potoana hikoriana amin'ny fahamatorana azo ampiasaina fotsiny izy ireo.
Sangisangy momba ny "tanin'ny tazo maina mandrakizay" avy amin'ny sokajin'ireo izay misy ny fahamarinana. Ankoatra izany, mila legioma sy volo aloha aho. Mba hanaovana izany, dia tsy maninona ny mianatra bebe kokoa momba ny lakandrano kely eo amin'ny varavarankely.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny famolavolana trano fisotroana sy fitaovana fanatsarana ny famokarana amin'ny tanana.
Fitaovana hosodoko: vola sy toetra
Ahoana ny fomba hametrahanao ny rahona amin'ny tananao?
Dingana amin'ny dingana manaraka
Misy orinasam-be maromaro no mivarotra serizy sy trano fambolena, ireo modely ireo ihany no azo vidiana amin'ny mpamokatra mora kokoa. Saingy maro ny olona tia manamboatra trano fandraisam-bahiny irery.
Andao hodinihintsika amin'ny antsipiriany ny fomba hanaovana trano fonenana ao an-trano? Amin'ny alalan'ny fitaovana, fitaovana, ary fahaiza-manao ilaina, dia azo atao izany.
Amin'ny voalohany dia hamaritana ny fahaizanao ara-bola ary manapaha hevitra hoe inona ny fitaovana hatao zavatra manan-danja. Izany dia mihatra amin'ny rafitry ny trano fonenana, ary amin'ny fonony.
Misafidiana amin'ny karazan-safidy samihafa amin'ny endrika, ny habe, ny fikandrana ny varavarankely sy ny varavarana araka ny fepetra manaraka:
Framework ho an'ny trano fonenana Tsy maintsy hentitra mafy sy maharitraIzany dia ahafahana manohitra ny fahasamihafana mandritra ny vanim-potoana, ny rivotra matevina ary ny rakotra matevina amin'ny ririnina, izay tsy maintsy mamorona entana fanampiny amin'ny rafitra;
Tokony tsy ho tapaka na hampihenana ny singa goavana, mba tsy hampihenana ny hazavana;
Raha ilaina, ny fametrahana matetika ny famerenana ny trano fivoahana dia tokony hanome vidy kely sy fanamorana mora foana.
Manapa-kevitra amin'ny zavatra rehetra takiana isika, mandinika ny tsenan'ny fitaovana ho an'ny fananganana ny rafitra ary mandrakotra ny fitaovana ho an'ny trano fonenana.
Ny trano fonenana hazo no tena sarobidy indrindra, mora sy ambany. Rehefa miasa tsy miankina, dia mora arahina nefa tsy mila fahaizana manokana na fitaovana matihanina fanampiny. Tsara ny tontolo iainana, mora ny fananganana
Saingy misy ihany koa ny tsy fahampiana, ny iray aminy ny azy fahamendrehana amin'ny fongana. Ilaina ny fitsaboana antiseptika, ary mila averimberina matetika izany. Ankoatra izany, ny fitaovana hazo dia mety ho voan'ny aretin'ny pilina na bibikely.
Ny fitaovana rehetra ampiasaina amin'ny fiarovana ireo fotodrafitrasa ireo dia tokony atao amin'ny fototra ara-biôlôjia, fa tsy manala ireo akora misy poizina, mba tsy hanimba ny vokatra efa lehibe.
Raha toa ianao ka mpanohana vahaolana momba ny tontolo iainana - izany no fitaovanao. Ilaina ihany ny manome azy ho toy ny venty sy ny fifandraisana araka izay tratra ao amin'ny rafitra, izay hanampy amin'ny fisorohana ny fanangonam-bozaka tafahoatra ao aminy.
Tokony hozaraina ny kesika hazoraha tsy izany dia hamafa ilay sarimihetsika rehefa rakotra. Mazava ho azy fa haharitra mandritra ny am-polotaona am-polony ny trano fambolena vita amin'ny karazam-borona sarobidy, saingy sarotra be izany safidy izany ka tsy azo heverina ho teoria mihitsy aza.
Made by Avy amin'ny fantsom-barotra vy dia azo antoka sy azo antoka. Raha misafidy ity fitaovana ity ianao, dia tena ilaina ny fampiasana fiara. Saingy misy trano maitso toy izany dia napetraka haingana. Ny fantsona tsara amin'ny rindrina vita amin'ny alàlany, ary ny trano fonenana vita amin'ny fanamafisana ny fiberglasses, dia maharitra kokoa ny androm-piainany. Na dia azo atao aza ny manadio fantsom-panafody miaraka amin'ny firaisana manokana.
Mora sy mora ampiasaina, maharitra. Ao amin'ny trano fonenana mahazatra, dia manjary avo lenta, Afaka manohitra ny enta-mavesatra ny rafitra.
Ny tsipiriany ao anatiny dia mifandray amin'ny zaklepochnik ao an-trano na amin'ny alàlan'ny lavaka manokana. Fitaovana tsotra ny famonoana sy ny fametahana fitaovana.
Na eo aza ny tombontsoa rehetra, ny trano fonenana dia haorina avy amin'ity fitaovana ity fa tsy noho ny vidiny avo loatra. Ary raha manapa-kevitra ny hanao izany trano fandraisam-bahiny ianao, dia hanampy anao amin'ny lahatsary izany.
Tena zavatra maoderina. Ny rafitra dia lasa mora, matanjaka, tsy mitaky fanodinana fanampiny, tsy mibaribary amin'ny fongana sy kiraro. Plastic plastique ho an'ny Mety handray endrika samihafa, tsara ho an'ny fanorenana tafo gorodona sy gables, ary koa ho an'ny trano fandraisam-bahiny avy amin'ny profesora ho an'ny gorodona.
Tsy dia mahazatra loatra ny fanangonam-bozaka plastika, tsy azo heverina ho heverina ho heverina fotsiny izy ireo raha toa ka manamboatra trano fonenana mahazatra. Noho ny fahazavany dia tsy maintsy ampifandraisina amin'ny fototra na amin'ny tany izy ireo.
Tsara ho an'ny trano fandraisam-bahinin'ny renivohitra izay tsy vita nandritra ny folo taona. Ny fanamafisam-peo vy amin'ny toeram-pitrandrahana dia mitaky fananganana fototra.
Tokony hosoloina ny faritra tsy voatsabo, tokony hodiovina miaraka amin'ny asidra phosphorique ary ny santionan'ny metaly. Raha afangaroina ny profil, dia ilaina ny manara-penitra sy manapaka.
Famokarana metaly metaly ho an'ny trano fonenana, jereo ny lahatsary etsy ambany.
Indraindray misy soso-kevitra momba ny fampiasana amin'ny fananganana trano fonenana varahina namboarina ho an'ny asa an-trano. Ny fampiharana dia mampiseho fa tsy ratsy ny fampiasana azy, fa ao anaty trano ho an'ny tany voaaro, noho ny fihenan'ny haavony ao aminy, dia mihena ny fahamendrehany. Amin'ny herintaona Mipoitra avy amin'ny fanambanin'ny zinc ny harafesina, aorian'ny iray na roa taona, dia mety tsara ny fananganana.
Fitaovana azo antoka ho an'ny fanorenana mafy. Ny fanampiana azy dia azo atao ny manangana odnoskatny, duo-pitch ary any amin'ny trano fambolena hafa, afa-tsy ny arofanina.
Hanohitra ny enta-mavesatra, sy ny lozam-pifamoivoizana, ary ny toetr'andro hafa. Azo atao ny mamorona rafitra matevina sy voaorina.
Mba hanamoràna ny sisin'ny trano fonenana, dia tsara kokoa ny mividy ny zorony.
Ary mba hampitombo ny fiainan'ny metaly mila manao fototra ianao. Noho izany, ny trano fonenana ao an-jorony dia tsy dia mifandray amin'ny tany ary mety hiteraka korontana.
Ny mpamboly ara-toekarena sy manam-pahaizana manokana dia manamboatra ny fantsom-pamokarana taorian'ny fanamboarana ny rafitra fanangonam-pako ho fitaovana fananganana. Mahagaga ny faharetan'izy ireo, madio izy ireo, noho izany dia tsy mila pads amin'ny sarimihetsika izy ireo.
Ny flexibility dia ahafahanao manamboatra endrika ariary. Tambolena avy amin'ity fitaovana ity, naorina tamin'ny lohataona, dia mahafinaritra ny fahavaratra sy ny fararano, alohan'ny hanombohan'ny oram-batravatra. Ny lanezy voalohany eo amin'ny tafo dia manosika ny trano fonenana amin'ny lanjany, ary hampiroborobo ny fiaraha-miombon'antoka izany, ary tsy hovana mihitsy ny fandrakofana ny fitaovana.
Azonao atao, mazava loatra, azonao atao ny manangana trano famonoana sy trano fambolena madinika avy amin'ny PVC ary manadio azy ireo amin'ny ririnina. Na miaraka amin'ny fanampiana amin'ny fitaovana sy ny singa hafa dia manampy mafy ny rafitra, raha tsy matahotra ny vola fanampiny sy ny fotoana. Hanampy ny lahatsarintsika ho an'ny fanavaozana goavana.
Ny rivotra iainana any amin'ny trano fivoahana dia tokony hahafa-po. Tsy voatery hianjady fotsiny ny rafitra fanodinana, ny fanondrahana sy ny jiro, fa koa amin'ny fananana ny fitaovana, izay
ny fanorenana dia rakotra.
Ny fitaratra ampiasaina amin'izany dia mamindra tsara ny hazavana, manohitra ny fiovan'ny hafanana. Manana fiantohana ara-tsakafo lehibe izy, azo atambatra amin'ny solon-tsakafo mahery sy ny vovobony matevina.
Miaraka amin'izany Tsy manana voka-dratsy kely izy:
Ny lanjany lehibe amin'ny fitaovana dia mitaky rafitra mavesatra sy maharitra;
Fahavitan-tena - fanimbana avy amin'ny havandra sy ny fihoaram-pefy.;
Tsy manasa ny taratra infrared;
Ho an'ny trano fandroana trano fonenana dia mitaky fotoana betsaka sy fahaiza-manao izany asa izany.
Mila giro matevina (4 mm) matevina, tsy misy fanoratana.
Ny halavan'ny rafitra dia hanome mangarahara ny rindrina sy ny tafo, fa ho mora kokoa amin'ny famoizana sy lafo kokoa amin'ny fanamboarana.
Tena sarotra ilay horonantsary sarobidy sy malaza noho io antony io. Manana mangarahara be izy io, manaparitaka moramora ny hazavana. Ny fatiantoka dia ahitana ny fiakarana haingana amin'ny vidin'ny marika ambany, ny fananganana ny condensate ao anaty trano fonenana, izay mahatonga ny fepetra tsara ho an'ny fivoaran'ny aretina bakteria sy fungal.
Ny teti-bola indrindra - polyethylene, dia aseho amin'ny takolaka amin'ny endriky ny akanjo na lamba lamba iray. Mihamitombo haingana ny kely na ny banga eo aminy, izay mitaky fampitandremana amin'ny asa. Tsara kokoa ny mampifandray ireo toerana misy fifandraisana amin'ny ravina ary miolakolaka amin'ny kasety tsotra. Manompo 1-2 taona.
PVC - lafo kokoaFa ny ambony dia ambony. Manana fiantohana ara-thermaly tsara izy, mitazona 90% ny taratra amin'ny infrarea. Amin'ny fikarakarana sahaza dia afaka maharitra hatramin'ny 7 taona.
Ny trano fambolena voajanahary azo vidiana - noho ny endriky ny fitaovana tsy mitovy (fiberglass, polyethylene, polypropylène) dia 3-4 taona.
Iray amin'ireo fitaovana maoderina indrindra ho an'ny trano fonenana.
Rehefa manasitrana dia apetaka ny polycarbonate. Noho izany, tsara kokoa ny mandrakotra ny trano fonenana amin'ny andro mafana, fa tsy eo ambany + 10 ° C, ary misy takelaka mihetsiketsika. Jereo ny fomba hanaovana izany ao amin'ny lahatsary etsy ambany.
Ny fitaovana dia maharitra sy mitafy, tsy mafana ny lanjany, ny kalitaon'ny hafanana mahatsiravina;
Hafatra tsara avy amin'ny cellule polycarbonate noho ny fandrefesana ny tara-masoandro. Ny lanjany na dia ampitahaina aza dia tena manatsara ny fandrosoan'ny zavamaniry;
Fitaovana maoderina Tena tsara ny mandrakotra ireo trano fisotroana tafo sy tonelina;
Mahasoa eo amin'ny asa, mora ny manapaka sy mamakivaky;
Ny famolavolan-kevitra tsara, izay tohanana amin'ny taolam-paty, dia hahatohitra havandra, rakotra matevina ary rivotra.
Tsy mila miala amin'ny ririnina.
Ny tsara indrindra dia ny misafidy karazana polycarbonate amin'ny 5 hatramin'ny 8 mm milimetatra, ny fiainan'ny vokatra avy amin'ny vokatra avy any ivelany dia mahatratra hatramin'ny 20 taona. Ny tahan'ny vidin'ny vidiny sy ny kalitain'ity tranga ity dia tsara indrindra. Ny alika tsara indrindra vita amin'ny polycarbonate, ho hitanao izany raha manaraka ny torohevitsika ianao.
Inona no azon'ity rafitra ity atao ho an'ny mpamboly mpamboly, inona ny fitaovana mety kokoa amin'ny tranokalanao? Andeha hodinihintsika ireo fanontaniana ireo, ary, ohatra, manaova tavoahangy misy sarin-doko.
Ny famolavolana ireo trano fonenana vita amin'ny polycarbonate amin'ny tanany ihany no ho matanjaka ampy ho an'ny lanjany ambany, manohitra ny fiantraikany ivelany, dia azo atao ny mametraka azy mivantana eo amin'ny tany voaomana, mora ny manilika sy mihetsika.
Amin'ny ankapobeny, izany dia trano fambolena mora, miaraka amin'ny tanany ary miaraka amin'ny fanahy iray, araka ny hita eo amin'ny sary.
Voalohany, tadiavo hoe inona no hitovy amin'ny tananao amin'ny alàlan'ny fitaovam-pako. Ankafizo ny fizotry ny fandrindrana, hevero ny zava-manahirana rehetra sy ny tombontsoa rehetra avy amin'ny fanamaivanana ny tany, Ny voalohany dia tsy maintsy ekena, ny faharoa ampiasaina.
Manaova sary sy sary miaraka amin'ny habeny sy ny endrik'ilay sary.
Manangona ny habetsaky ny fitaovana sy ny fitaovana. Mila: tapa-tapa-tavoahangin-tavoahangy, guides, hosodoko amam-bidy.
Ilaintsika ihany koa ny fepetra, peta-drindrina, tapa-tsoavaly, sandry metaly.
Manomana ilay teti-bola isika, manadio ny tany amin'ny fako ary manainga ny tany.
Apetraho ny mariam-pitaovana, raha ilaina - manao ny fototra izahay.
Tsy lavitra ny toerana izay hitoeran'ny trano fonenana, manomboka asa isika.
Ho an'ny famolavolana raki-tsavoka dia zarazara ho azy ireo amin'ny antsipiriany ny halavan'ny fotoana mifanaraka amin'ny haben'ny trano fonenana, ny halavany sy ny sakany.
Voalohany dia manangona ny fotony isika, ny singa hafa mifatotra eo aminy.
Sarin-kafatra ho an'ny hafa Manangona miaraka amin'ny varavarana eo amin'ny faritra fisaka izahayary afindrano eo amin'ilay rafitra
Mba tsy hanamboarana fanamboarana matetika, dia mieritrereta hoe manamboatra trano fivoahana maimaim-poana ary azo itokisana araka ny tokony ho izy, mifototra amin'ny fahalalana ny tsy fahampiana sy ny mendrika ny fitaovana tianao hampiasaina. Ankoatr'izay, mba hanitarana ny fiainan'ny serivisy, dia mila mahafantatra ny fomba hikarakarana sy fanomanana ny fonosana polycarbonate amin'ny vanim-potoana vaovao.
Ny zaridaina tsirairay dia manana ny heviny manokana momba ny fomba hijereny ny tranokalany sy ny tranobeny. Azontsika atao ny milaza fotsiny hoe inona no mahatonga ny trano fonenana mora vidiana amin'ny tanantsika, ary koa maneho fahitana.
Manandrama miaraka amin'ny fitaovana, endrika ary fitsipiky ny fametrahana. Aza adino ny manatona tsara ny zava-drehetra, rehefa avy nandinika ny fiantraikany sy ny fanirian'ny fitaovana sy ny teknolojia maoderina.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Toe-pahamendrehana azo antoka ho an'ny trano fonenana manao izany avy amin'ny fitaovana maimaim-poana: sarobidy nefa mahafa-po